I-ANC ifuna ukulubambezela futhi udaba lukaAce | Scrolla Izindaba
I-ANC ifuna ukulubambezela futhi udaba lukaAce
Ikusasa likaAce Magashule njengoNobhala weqembu elibusayo lizophinde lube udaba olubaluleke kakhulu uma iKomidi Eliphezulu le-ANC lihlangana kuleli sonto.
Ekupheleni konyaka odlule, iKomidi Lezobuqotho Likazwelonke le-ANC leluleka ukuthi uMagashule kumele ehle esikhundleni noma amiswe esikhundleni sakhe.
NgoLwesine nangoLwesihlanu izikhulu ze-ANC kulindeleke ukuthi zikhulume ngalesi siphakamiso.
Amathuba ukuthi leli qembu lidlulisele lolu daba eMkhandlwini Kazwelonke ngoMbasa. Le yimpi yomphefumulo we-ANC, futhi mancane amathuba okuthi ixazululwe ngokushesha.
Isinqumo sengqungquthela esimile se-ANC sithi noma ngubani ophethe ihhovisi noma omele i-ANC ngokusemthethweni obekwe icala lobugebengu kufanele avikele ubuqotho beqembu, futhi ashiye eceleni aze asulwe amacala yizinkantolo.
UMagashule uvulelwe icala lokukhwabanisa nenkohlakalo esuselwa esigabeni samathenda e-asbestos ezigidi ezingama-R255 kusukela ngesikhathi enguNdunankulu wase-Free State.
Kulindeleke avele enkantolo ngoNhlolanja mhla zingama-19.
Ukugijimisana kwakhe nomthetho manje sekudale ukungabaza nokungabaluleki komyalezo we-ANC wokulungisa inkohlakalo ezingeni lomasipala.
Uma zingekho izinyathelo ezithathwayo ngoMagashule, kulindeleke ukuthi ahole umkhankaso we-ANC ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya ngasekupheleni konyaka.
Engxoxweni edlule nabakwa-Scrolla.Africa, uMagashule wasitshela ukuthi amagatsha e-ANC kuphela angamsusa esikhundleni sakhe.
Wenza usongo olumboziwe kozakwabo ababelwela ukumkhipha.
“Abanye abantu bafuna ukusebenzisa izinhlaka ze-ANC ukubhekana nezimbangi zabo. Ngimele ubumbano futhi amagatsha angiphathisa umsebenzi wokuhlanganisa iqembu ngesikhathi lingikhetha ngowezi-2017.”
NgoNcwaba wonyaka odlule uMengameli uCyril Ramaphosa wabhalela amalungu e-ANC incwadi ukuze asize ekuqedeni inkohlakalo ngaphakathi ku-ANC.
“… Njengamanje sidinga ukudweba umugqa esihlabathini.
“Kumele sithathe izinyathelo eziphuthumayo, sidinga ukuthatha isinqumo futhi kumele sikhombise ngokusobala intando yezepolitiki.
Isikhathi sesifikile sokuthi i-ANC ingantengantengi ekubuyiseni amagugu, isimilo kanye nokuma kwenhlangano yethu.
“Imisebenzi yethu kumele, ngaso sonke isikhathi, ihambisane namazwi ethu.
“Asikwazi njenge-ANC ukuzibiza ngabaholi bomphakathi uma sihluleka ukuhola abantu ekuqedeni inkohlakalo ezinhlwini zethu.”